Ukugcagca – iAfrika
Ngokosiko lwesiZulu ukugcagca kuqala uyihlo wakho ebe engakagcagci akuvumelekile ngoba lokho kokhokho bakho kusho ukuthi nguwena osuyindoda, okwenza kube sengathi umuzi wakini usungowakho, okungasho ukuthi uyihlo yena useyingane. Ngenxa yaleso sizathu kuyaye kuthiwe uma usufuna ukugcagcelwa, kumelwe kuqale uyihlo kuqala, uma engasekho esadlula emhlabeni engagcagcanga kumelwe uqale ngokwenzela uyihlo usiko olumelele ukugcagca bese kuthi kamuva-ke nawe ube usugcagca.
Ukugcagcelwa kusho ukubikela okhokho bakho ukuthi nawe usukhulile usuyindoda, futhi usunonkosikazi. Lokhu kuqhubeka kulokho okwaqala ekufikeni kwakho emhlabeni, njengoba ekuzalweni kwakho wawubikiwe ekhaya kwenu ngembuzi ukuthi kunenye ingane esikhona lapha ekhaya, kwaze kwachazwa ukuthi kucelwa ukuba amadlozi ayigade. Uma ungumZulu kunezinto ezibalulekile okumelwe zenziwe lapho kugcagcwa, lezi zinto zihlanganisa ukushiswa kwempepho kanye nokuhlatshwa kwenkomo ehlanganisa amadlozi akwamakoti nalawo akwamkhwenyana. Futhi kuyaye kuchelwe umakoti ngenyongo ukumhlanganisa namadlozi alapho agcagcela khona.
Tags Amadlozi, Impepho, Ukugcagca Post navigation